Internet Download Manager Speed ဂိတ်ဆုံးထိမြှင့်မယ် ~ ဇင်ကို(နည်းပညာ)
Internet Download Manager Speed ဂိတ်ဆုံးထိမြှင့်မယ်
9:15:00 am Download No comments
Internet Download Manager ကို လူကြိုက်များရတဲ့အကြောင်းကတော့...Download Speed မြန်လွန်းလို့ဖြစ်ပါတယ်။
Connection နှေးနေတဲ့နေရာတွေမှာဆိုရင် သီချင်းတွေ၊ Videoတွေကိုဆွဲရမည်ဆိုပါက Internet Download Manager ကို အရင်ဆုံး စက်ထဲသွင်းဖြစ်လိမ့်မည်ထင်ပါတယ်။
ဒါကြောင့်...လူအသုံးများတဲ့ IDM ကို အမြင့်ဆုံး Speed ထိ မိုင်ကုန်တင်ပြီး Download ဆွဲနိုင်ရင်ကော ပိုမမိုက်ဘူးလား...
ကလိကြည့်ချင်တဲ့ ဆိုရင်တော့ ဒီနည်းလေးအတိုင်း လိုက်လုပ်ကြည့်ပေးပါ...
ပထမနည်းလမ်းက Manually လုပ်ရတာပါ။
၁ - IDM ကိုဖွင့်ပါ။
၂ - Download > Options > Connections Tab ကိုသွားပါ။
၃ - Connection Type/Speed ကို Other လို့ရွေးပါ။
၄ - ဘေးနားက bps ကို 83886080 လို့ထည့်ပေးပါ။
၅ - Default Max. Con. Number ကို 16 လို့ရွေးပေးပါ။
၆ - Ok နှိပ်ပါ။
၇ - IDM ကို Restart လုပ်ပါ။
ဒါက ပထမနည်းလမ်းပါ။ ဒုတိယနည်းလမ်းကတော့ Tool လေးတစ်ခုနဲ့ လုပ်ရတာပါ။
နာမည်ကတော့ IDM Optimizer လို့ခေါ်ပါတယ်။
အရင်ဆုံး ဒီ လင့် (http://www.filedownloads.org/13wh3szu5iqu/IDMOptimizer-by-vikash.rar.html) လေးကနေ Download ဆွဲယူပေးပါ။
ပြီးရင် Unzip လုပ်ပြီး Program ကို Run ပေးပါ။
ပြီး...Maximize Now! ကို နှိပ်၊ IDM ကို Restart ချလိုက်ရင် စတင်အသုံးပြုလို့ရပါပြီ။
အရင် ပုံမှန်အတိုင်းပြန်ထားချင်ရင်တော့ Restore Default ပေါ့...
ဒါကတော့ IDM Speed မြှင့်ပြီး စမ်းကြည့်ချင်သူများအတွက် အသုံးတည့်မယ့် နည်းလမ်းနှစ်မျိုးပါခင်ဗျာ။